Goobaha Khadka Tooska ah ee Macedoniya - Xeerarka Lacagta Kaadhadhka ee Khadka Tooska ah
(345 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Maanta, Macedonia waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago. Marka lagu daro buuraha dabiiciga ah, harooyinka iyo hawo nadiif ah, waxay soo jiitaan dalxiisayaasha iyo casinos badan. Khamaaristu waa sharci Macedonia, wadanku wuxuu leeyahay nidaam shati rasmi ah. Ka dib markaad hesho liisanka, waxaad furi kartaa xarun khamaaris, iyada oo qayb ka mid ah faa'iidooyinka ka soo baxa khamaarka ay aadaan adeegyada bulshada iyo horumarinta waddanka. Khamaarista waa mid caan ku ah dadka deegaanka, ciyaarta waxaa loo oggol yahay dadka ka weyn 18 sano.
Ogaysiis ku saabsan booqdayaasha galka khamaarka ee khadka tooska ah, marka lagu daro casinos-ka dhulka ku saleysan ee Makedoniya waxaa sidoo kale jira tiro aad u tiro badan oo buug sameeyayaal ah. Buug-sameeyaal ku takhasusay dhacdooyinka isboortiga, ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday Macedonia sanadkii 1999. Ka dib sannado kooban oo ay dalka ka shaqeynayeen in ka badan 80 buugaag sameeyayaal ah, oo shati ay siisay Wasaaradda Maaliyadda, tirada buugaagta sameeyana ay sii kordheyso.
Liiska ugu sareeya ee 10 Macedonian Online Casino
Khamaarka internetka ee Makedoniya
Khamaarka khadka tooska ah wuxuu ku baahsan yahay dadka reer Makedoniya, gaar ahaan dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 25 sano. Dalka gudihiisa waxay ka shaqeeyaan goobaha khamaarka ee internetka sida Macedonia iyo hawlwadeenno shisheeye. Dawladdu waxay dhawaan shaacisay qorshayaal ay ku doonayso inay kali ku noqoto bixinta adeegyada khamaarka ee internetka. Marka loo eego sharciyada cusub ee qamaarka internetka ee Macedonia, marinka goobaha aan shatiga lahayn waa la xayirayaa. Qaar ka mid ah bixiyeyaasha sida Bodog iyo Partypoker, ayaa horay uga baxay dalka.
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalay ciyaartoyda ka yimid Makedoniya
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Macedonia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada boggaga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoyga ka socda Makedonia
Makedoniya - muuqaalkan buuraleyda ah iyo hawo nadiif ah, socodka iyo raafka, madaddaalada harooyinka iyo dalxiisyo badan. Waxay halkan u yimaadeen inay si buuxda ugu raaxaystaan ​​fasax firfircoon, laakiin sidoo kale inay ka ciyaaraan khamaar, taas oo aad u badan oo u muuqata inay la mid tahay Las Vegas. Joogsiga xiga waa CasinoToplists oo ku taal Skopje - caasimadda qarsoodiga ah ee Makedoniya.
Macedonia - Macluumaadka juqraafi iyo taariikheed;
Dhaqdhaqaaqayaasha khamaarka xuquuqdaada ayaa ku dhawaad ​​aan xad lahayn.
Casino ugu caansan Makedoniya:
HiT CASINO Hotel iyo Casino Dojran;
Hotel Epinal iyo LeGrand Casino;
Casriyeynta Flamingo Hotel;
Gabadha Casriga ah ee Caalamiga ah;
Sharciga sharci-dejiyeyaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye.
Shan goobood oo caasimadda Makedoniya Skopje cinwaanada;
Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan dalka iyo dadka deggan.
Goobta Macedonia iyo asalka taariikheed ee kooban
Macedonia, oo si sax ah ugu magacawday Jamhuuriyadda Macedonia ama Jamhuuriyadda Yugoslavia ee Macedonia (FYROM sida ku qoran UN-ka) - oo ah dal yar oo ku yaal bartamaha Yurub, ma laha marin looga baxo badda. Wadamada deriska ah ee ugu dhow: Serbia, Kosovo, Greece, Albania, Bulgaria.
Inkasta oo magaca isla markiiba uu abuuray ururo la leh Alexander the Great, haddana waa boqor weyn oo ah milatari millatari oo ku dhashay Makedoniyadii hore, oo ku yaalla dhulka Giriigga.
Gobolka Macedonia, oo la sameeyay 1991, wuxuu daboolayaa 35% oo keliya dhulka, taas oo ah gobolka taariikh ee Makedonia. Magacyada casriga ah awgood waxay ku dhasheen khilaafyo badan oo lala galo Griiga, oo leh 65% dhulka.
Taariikhda Makedonia waxay leedahay kumanaan kun oo sano, geeskaan yurub wuxuu ka mid ahaa Roman ka dibna Boqortooyadii Byzantine, Bulgarian Empire, Serbian Empire, Ottoman Empire, Yugoslavia. Si weyn saameyn ugu yeeshay dadyowgii waqtiyadii hantiwadaagga iyo dagaalladii Balkan.
Sannadkii 1991, Macedonia dhiig la’aan ayaa ka go'day Yugoslavia. Hadda waa jamhuuriyad baarlamaani ah. Isku shaandhaynta siyaasadeed waxay calaamadeysay isbeddel dhanka wanaagsan ah. Macedonia dhexdeeda, waa nolol heer sare ah. Dalku wuxuu kamid yahay EU iyo NATO.
Burburinta iyo khamaarka Macedonia
Maanta, Macedonia waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago. Si tan loo sameeyo, sababo badan, laakiin socotada qaar waxay u aadaan dartiis raaxo iyo raaxo inay ku ciyaaraan casino badan.
Xuquuqda xadka Griiga wuxuu furay noocyo kala duwan: guryo khamaar dhalaalaya iyo beero canab ah oo aan dhammaad lahayn. Waxaa jira casinos gudaha Skopje - caasimada quruxda badan ee gobolka.
Sharciyada Macedonia waa sida kuwa xaq u leh kuwa ka shaqeeya khamaarka ay yihiin kuwa aan xad lahayn. Muwaadin ama qurbajoog waxay xaq u leeyihiin inay furaan casino, haddii ay qadar cayiman gacanta ku hayaan. Ka dib helitaanka liisanka waxaa loo oggolaan karaa inuu abaabulo casino si aad uhesho.
Qaybtaan faa'iidada laga helo shirkadaha khamaarka waxaa lagu bixiyaa dhismaha waddooyinka, dib u soo celinta goobaha taariikhiga ah iyo ujeedooyinka bulshada.
Inta badan casinos-ka Macedonia waxay shaqeeyaan saacad kasta, laakiin waxaa fiican in la cayimo jadwal hore. Martidu waa inay ahaadaan 18 jir. Badanaa, lambarka labiska ayaa ku lug leh xirashada dharka, laakiin waxaa jira kiisas aan caadi ahayn.
Casino ugu caansan Makedoniya
Wadanku ma ahan mid aad u wanaagsan, laakiin magaalo kasta oo weyni waxay ku xiran tahay inay leedahay casiinyo yar.
Skopje waxay leedahay seddex casinos oo waaweyn: Casino 23 - Bristol Hotel, Le Grand Casino - Holiday Inn Hotel, Viva Casino.
Khamaarka ugu weyn ee Ohrid waa Metropol Lake Resort iyo Casino oo adag.
In Gevgelija waa aag khamaar dhab ah. Halkan waxaa ku yaal aasaasid heer sare ah, oo awood u leh qancinta inta ugu badan ee ciyaartoy: Casino Flamingo Hotel 5 *, Apollonia Casino, Casino Motel Senator, Princess International.
Doyrane waxay degeen HiT CASINO Hotel iyo Casino Dojran.
Xarunta ugu weyn ee khamaarka waa Bitola Hotel Epinal iyo LeGrand Casino.
Tan iyo waddan yar, iyo casinos badan, qaar yar oo iyaga ka mid ah ayaa hammi leh. Laakiin wali waxay mudan tahay fiiro gaar ah Casriyeynta Flamingo Hotel 5 * ee Gevgelija.
Makhaayaddan raaxada leh waxay u egtahay daar yar ama buul raaxo leh oo jilicsan halkii laga heli lahaa guud ahaan. Beerta horteeda waxay ku taal.
Hoolka khamaarka waxaa ku yaal 16 miis oo loogu talagalay turubka noocyo kala duwan iyo blackjack, sidoo kale wuxuu leeyahay 10 miis oo roulette Mareykan ah. Taageerayaasha mashiinada ciyaarta waxay heli doonaan ku filan - 440 boos.
In kasta oo Flamingo shaqeynayo waqti dheer, haddana sanadkii 2013, waxaa lagu beddelay milkiilaha. Thanks to maalgashiga 25 milyan oo euro oo gabi ahaanba isbedelay.
casino Princess International in Gevgelija Casino waa qayb ka mid ah shabakadaha caalamiga ah. Halkan naqshad raaxo leh oo lagu daray tas-hiilaad casri ah oo aan caqabad ku ahayn. Abaabulayaashu waxay si joogto ah uga shaqeeyaan inay abuuraan jawi gaar ah. Isu soo baxyada sida joogtada ah loo qabto, munaasabadaha, barnaamijyada ciidaha, bandhigyada xiddigaha.
Le Grand Casino - Holiday Inn Hotel in Skopje - doorashada ugu fiican ee lagu qaato fiidkii madadaalada. Makhaayada casriga ahi waxay ku taal daafaha wabiga Vardar. Meel u dhow waa qalcaddii qarnigii 6aad iyo buundada dhagaxa ah ee qarnigii 15aad. Si halkan loogu ciyaaro waxaa laga helay 2 miisas turub, 13 miis oo loogu talagalay ciyaaraha kale, 15 boos.
Ciyaarta internetka ee dalka Macedonia
Macedonia gudaheeda, waxaa loo oggol yahay dhammaan noocyada waxqabadyada khamaarka, oo ay ku jiraan shaqada qamaarka internetka. Gudaha waddanka ee ka shaqeynaya daraasiin hawl wadeyaal ah, shirkado Macedonia iyo ajnabi isugu jira.
Buundo dhagax ah. Cinwaanka: Keј Dimitar Vlahov broј 1 Skopјe 1000. Mid ka mid ah buundooyinka ugu caansan ee laga helo Vardar-ka caasimada. Buundada dhowr jeer ayaa dib loo dhisay waxaana lagu sameeyay dayactir, sida ku xusan halyeeyga, laga soo bilaabo xilligii Roomaaniyiinta.
Matxafkii halgankii Makedoniya. Cinwaanka: Mar 11 daqiiqad, Skopјe 1000. Halganka Matxafka casriga ah ee dadka reer Makedonia ee dowlad-nimada iyo madax-bannaanida, wuxuu furmay 2011.
Skopje Kale (Qalcadda Skopje). Cinwaanka: Centar, Skopјe 1000. Nidaamkan difaaca ee qarniyadii dhexe wuxuu taaganyahay bartamaha magaalada waana taalada ugu muhiimsan ee qadiimiga ah.
Kaniisadda Katidral ee St. Clement ee Ohrid. Cinwaanka: Bul. Sveti Kliment Ohridski, Skopјe 1000. Kaniisad leh qubbad goos goos ah oo la mahadiyo oo dib loo dhisay sanadkii 1970 isla goobtii macbud isku mid ah, oo ay burburiyeen Naasiyiintu.
Monastery Saint Panteleimon. Cinwaanka: Zagreb 3 Skopјe 1000. Macbadka krestokupolny ee gaarka ah ee la dhisay qarnigii 12aad, waa tusaale wanaagsan oo ah qaab dhismeedka qarniyadii hore.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Makedoniya iyo Macedoniyiin
Macedonians - dad aad u waddaniyiin ah oo firfircoon siyaasad ahaan.
Dumarka reer Makedoniya intooda badan ma shaqeynin, waxayna qabtaan guriga iyo korinta carruurta.
Mandolin - Qalabka muusikada qaranka ee Makedonia.
Wadanka 5 qarniyo wuxuu ku hoos jiray xukunka Turkiga, sidaa darteed dhaqanka iyo muusiguba aad bey uxun yihiin Turkiga.
Harada Ohrid - waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn meeraha, waa 5 milyan oo sano.
Oro - qoob ka ciyaarka qaranka, oo aad ugu eg qoob ka ciyaarka. Laakiin gacanta gacanta, waa inaad been abuurtaa qaabab isku dhafan cagaha.
0.1 Liiska ugu sareeya ee 10 Macedonian Online Casino
2.1 Khamaarka internetka ee Makedoniya
2.2 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalay ciyaartoyda ka yimid Makedoniya
3 Khamaarista Macedonia
3.0.1 Goobta Macedonia iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Burburinta iyo khamaarka Macedonia
3.1.1 Casino ugu caansan Makedoniya
3.2 Ciyaarta internetka ee dalka Macedonia
3.2.1 Soojiidashada Skopje
3.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Makedoniya iyo Macedoniyiin
lacag bilaash ah oo lacag casaan ah khadka tooska ah